I-Ocean Front Resort Condo - I-Airbnb
I-Ocean Front Resort Condo
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Patty
U-Patty Ungumbungazi ovelele
Jabulela Indlwana Yasogwini Ukuhlala endaweni ethandekayo ye-540 sq yegumbi lokulala elilodwa i-villa ngaphakathi kwe-resort egcwele umsebenzi ye-Hilton Head Beach ne-Tennis. Ilungiswe kabusha ngokuphelele kusuka kuzo zonke izinto ezintsha, ifenisha, izinto zasendlini kanye nezinsiza, le villa yasebhishi enhle isanda kuvula iminyango yayo yezivakashi ngo-March 2019. Amasevisi ahlanganisa ikhofi, i-cocoa, i-popcorn, ukudla kwasekuseni namanzi asemabhodleleni okudla; namathawula asebhishi, izihlalo, ama-umbrellas nezinye izinto ongaziboleka ngenkathi ulapha.
Jabulela isampula lezithelo nokudla okulula kanye namanzi asemabhodleleni nezimbali ezintsha. Sicela usitshele ngesenzakalo sakho esikhethekile futhi sizokwenza konke okusemandleni ethu ukwenza sikhetheke ngokwengeziwe lapho ufika.
Izindawo zokulala zihlanganisa umbhede omkhulu womcamelo omkhulu ekamelweni lokulala elikhulu, usofa omkhulu wokulala onomatilasi wegel egumbini lokuphumula kanye nemibhede emibili egcwele abantu abanokunethezeka endaweni ehlukile yokulala eneminyango yobumfihlo.
4.99 · 217 okushiwo abanye
I-Villa isendaweni ye-3-Star Resort ehlanganisa izindawo zokudlela, indawo yokuzivocavoca, indawo yokubhukuda engaphambi kolwandle namanye amasevisi. Isendaweni ephakathi ne-resort ebiyelwe nezinyathelo eziya ebhishi, izindawo zokudlela, negalofu elincane. Izindawo zokudlala igalofu zasendaweni, amamayela ezindledlana zamabhayisikili (nokuqashwa kwamabhayisikili esayithini), izindawo zokudlela ezinhle nezindawo zokudlela zomndeni kanye nezinye izindawo zokuheha eziningi ziyashesha ukuhamba ngezinyawo, ukugibela ibhayisikili noma ukuhamba ngemoto.
As a retired professional, I very much enjoy exceptional hospitality at an affordable price and getaway retreats that are fully equipped with no details missed. My goal is to cre…
Inombolo yamasevisi ezivakashi enikeziwe futhi usizo umane nje uyithumela umlayezo wokushayelwa ucingo.
UPatty Ungumbungazi ovelele